Archive du 12-nov-2021
Resy indray ny Barea Lesoka hatrany ny famonoam-baolina
Tapitra tanteraka omaly 11 novambra ny herijika amin’ity fifanintsanana handehanana any “Qatar 2022” ho an’ny ekipam-pirenena Malagasy amin’ny baolina kitra.
Tsy hoe isan’andro ny zava-drehetra no azo jerena miabo fa misy fotoana kosa tena ilaina izay fomba fijery izay ahafahana miroso amina dingana na tanjona iray vaovao tiana ahatongavana indray.
Sekoly politeknikan’Antananarivo “Mihena toy ny fen’antitra ny mpampianatra raikitra”
Raha 183 ny mpampianatra tamin’ny 2015 dia efa 153 sisa amin’izao fotoana izao, ary mety ho 99 sisa amin’ny 2025, hoy ny Filohan’ny Collège des Enseignements permanents eo anivon’ny
Fahafatesana mpianatra mpanamory tao Antsirabe Nampahatsiahy ny toky nataon’ny Filoha ny fianakavian’ny maty
Feno 2 taona omaly, raha ny fitarainan’ny fofombadiny fahavelony, Andrianina Ravel, no nahafaty an’i Rakotoson Mamimaherimanana Andrianina, mpianatra mpanamory fiaramanidina na “ élève officier pilote”
Julien Andriamorasata “Sorabola fa tsy vola no betsaka eto”
Tokony hiasa mafy ny fahefam-panjakana amin’izao fotoana izao, hoy ny manam-pahaizana momba ny fitantanana raharaham-panjakana, Julien Andriamorasata.
Afaka bakalorea 2020 sy 2021 “Tena tsy mitombina ny fampidirana azy ireo miaraka”
Mbola adihevitra tsy mety tapitra hatramin’izao ny fisian’ny fifanitsahan’ireo mpianatra afaka bakalorea tamin’ny taona 2020 sy 2021 tokony hiditra ny amin’ny Oniversitem-panjakana.
Ambodiafotsy Ampitatafika Torana ilay mpitondra moto nifandona tamin’ny fiara 4x4
Lehilahy iray nitondra moto nifandona tamina fiara 4x4 voalaza fa fiara mpitondra marary omaly hariva efa maizina teny Ambodiafotsy Ampitatafika.
Fiovaovan’ny toetr’andro Tandindomin-doza ny firenena, hoy ny SECES
Nanao fanambarana tetsy amin’ny oniversiten’Antananarivo etsy Ankatso omaly ny avy eo anivon’ny sendikan’ny mpampianatra mpikaroka sy mpikaroka mpampianatra eto Antananarivo na SECES
Mahitsy Hovita tsy ho ela ny “lalan’ny atody”
Ao anatin'ny tena famaranana ny asa fanamboarana ny lalan’ny atody ao Mahitsy tanteraka ankehitriny ny orinasa misahana izany.
Rajoelina sy ny ekipany Voaporofo izao fa nampiesona tamin'ny propagandy
Mamatotra ny Filoha Rajoelina sy ny ekipany ny zava-misy rehetra ara-pitantana eto amin’ny tany sy ny Fanjakana ankehitriny.
Hentitra ny SECES Antananarivo « Tsy hanao afatsy ny fetr’ora faritan’ny lalàna sisa izahay »
Manohy hatrany ny fitakiana ny zo sy hasin’ny mpampianatra ny Sendikan’ny Mpampianatra Mpikaroka sy Mpikaroka Mpampianatra na ny SECES Sampana Antananarivo.
Atsimondrano Nahatrarana heroine 18 fonosana ilay lehilahy
Lehilahy iray 24 taona no nosamborin’ny Polisy avy ao Tanjombato ny 10 nnovambra lasa teo tokony ho tamin’ny 05 ora hariva rehefa nahatrarana zava-mahadomelina.
Fenoarivo Atsinanana Olona 35 voapoizin’ny « composé »
Olona miisa 35 no fantatra fa voapoizin’ny fihinanana compose nisy maionezy tany amin’ny distrikan’i Fenoarivobe. Misy ankizy sy olon-dehibe izy ireo toeram-pivarotana
Désiré Ranaivoson “Tsy misy mazia izany io”
Ny fiovaovan’ny toetr’andro dia zavatra fantatra fa iainan’izao tontolo izao, hoy ny filohan’ny antoko politika Marina, Désiré Ranaivoson.
Paul Rabary “Very izay tsy mitondra amin’ny 2023”
Na ho an’ny mpanohitra na mpanohana fitondrana io satria mihazakazaka be, hoy izy. Fifidianana hahafahana mamarana tanteraka ny krizy 2009 io.
Sendikan’ny Mpitsara eto Madagasikara Mbitanarivo Andriantsihorisoa no Filoha vaovao
Lany ho Filohan’ny Sendikan’ny Mpitsara eto Madagasikara (SMM) ny mpitsara Mbitanarivo Andriantsihorisoa, araka ny fifidianana natao omaly.
Ankazomanga Tratra ireo mpamaky trano nikoizana
Lehilahy miisa roa 29 taona sy 30 taona no voasambotry ny Polisy miasa ao Ambohimanarina ny alin’ny faha 06 novambra 2021 lasa teo teny amin’ny fokontany Ankazomanga rehefa avy nanendaka.
Fanafihana mitam-piadiana Jiolahy 3 no matin’ny polisy tany Bongolava
Jiolahy miisa 3 no lavon’ny balan’ny polisy miasa ao amin’ny Fitaleavam-paritra Bongolava ny 16 oktobra teo sy ny 11 novambra 2021 lasa teo tany an-toerana noho ny resaka fanafihana mitam-piadiana.
Marc Ravalomanana Nifanakalo hevitra tamin'ireo Depiote TIM
Nifanakalo hevitra tamin’ireo Solombavambahoaka lany tamin'ny anaran'ny antoko TIM sy ny birao politika i Nahafaly ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana omaly 11 novambra.